Nisy maty ve tao amin'ny Tour de France? - Tour De France
Tena > Tour De France > Mianjera ny Tour de France - vahaolana pragmatika
Mianjera ny Tour de France - vahaolana pragmatika
Nisy maty ve tao amin'ny Tour de France?
1 KolFromPortet-d'Aspet nandritra ny dingana 15 tamin'ny 1995Tour de Francetamin'ny 18 Jolay. Tamin'ny iray tamin'ireo tranga nampijaly indrindra taofitetezam-paritratantara, ny italianinaMATYvokatry ny ratra teo amin'ny lohany. 24 taona izy Na teo aza ny ezaka natao hamelomana azy indray, CasartelliMATYhandeha ho any amin'ny hopitaly.
Raha mijery akaiky ireo fonosin'ireo mpitaingin-tsoavaly ao amin'ny Tour de France ianao dia hahita ny sasany amin'ireo bisikileta tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Miverina eto ianao. Mihazona izy ireo, nefa miala sasatra ihany koa raha ny mpiara-miasa aminy eo aloha kosa manao ny ankamaroan'ny asa.
Ity teknika ity dia antsoina hoe fandrafetana ary manampy azy ireo hiaina ny hazakazaka mandritra ny telo herinandro amin'ny alàlan'i Frantsa. Saingy amin'ireo fizarana amin'ny zotra ireo ihany no anaovan'ny volavolan-dalàna fiovana lehibe: ny dingana lava, fisaka sy havoana. Amin'ny farany, ireo mpamily ireo dia mahatratra dingana izay tsy azony ianteherana amin'ny hafa.
Mila miantehitra amin'ny herinao sy ny fiaretanao ianao mba handresenao amin'ny hazakazaka. Izany dia mitranga eto amin'ny climbs. Izy ireo no faritra lozabe indrindra sy manaitaitra indrindra amin'ny hazakazaka ary manao ny Tour de France ho fitsidihana bisikileta malaza indrindra eran'izao tontolo izao
Ny Tour de France dia nanomboka tamim-panandramana mafy mba hahazoana kopian'ny gazety ara-panatanjahantena L. amidy 'fiara. Sahirana ilay taratasy, ka tamin'ny 1903, ny mpampanonta azy, Henri Desgranges, dia nikarakara hazakazaka bisikileta 2 400 kilometatra 19 andro nanerana ny firenena.
Nanjary fahombiazana tokoa izany ka nataon'i L'Auto ho hetsika fanao isan-taona. Nanampy làlana vaovao isan-taona izy ireo mba hahatonga ny fitsangatsanganana ho sarotra sy hahaliana kokoa amin'ny olona. Tamin'ny 1908, avo roa heny ny varotra L'Auto.
Tamin'ny 1910, Alphonse Steines, iray amin'ireo mpanoratra an'i Desgranges, dia nanolo-kevitra ny hanisy fiovana vaovao amin'ilay zotra: ny tourmalet. Fiakarana masiaka 19 kilometatra ary 1400 metatra ny tampon'ilay tampon. Raha hijery raha azo atao izany dia nitsambikina tao anaty fiarany i Steines mba hanao fiakarana.
Nandeha izy fa ny fiarany kosa nifatratra tao anaty lanezy, narary hypothermia ary saika maty. Na eo aza izany dia nandefa telegrama izy manao hoe: Niampita i Tourmalet. Làlana tena tsara.
Passable tonga lafatra. Ny Tourmalet dia nanao ny laharana voalohany tamin'ny Tour tamin'ny 1910. Ilay bisikileta frantsay Octave Lapize no voalohany niakatra fiakarana tamim-pahombiazana.
Saingy tsy maintsy nandeha niakatra tamin'ny faritra sasany izy ary fantatra fa hiantso ireo mpamono olona tompon'andraikitra rehefa tonga tany an-tampon'ny tampon'isa izy. Saingy nandresy ny fitsangatsanganana iray manontolo izy ary napetraka eo an-tampon'ny turmety ny sarivongany. Nanomboka teo, ny fiakarana dia ampahany lehibe amin'ny Tour deFrance.
Amin'ity taona ity, ny zotra dia misy dingana 21 mihoatra ny 23 andro. Manana fiakarana lehibe 30 izy; fito amin'izy ireo no anisan'ny sokajy sarotra indrindra amin'ny fitsidihana. Anisan'izany ny Tourmalet, izay misy fanindroany faha-86.
Mihoatra noho ny fitomboan'ny tantaran'ny fitsangatsanganana. Amin'ireto fiakarana ireto dia ho resy na ho resy ny fitsidihana. Ireo no dingana lava, fisaka ary be havoana izay manodidina ny 200 kilometatra matetika.
Eto dia mitaingina bisikileta amin'ny endrika antsoina hoe peloton ny mpitaingina bisikileta. Izy io dia ahafahan'ny mpitaingina bisikileta mitahiry angovo amin'ny alàlan'ny fipetrahana ao ambadiky ny mpitaingina hafa na mitaingina slipstream. Amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta dia ampiasain'ny mpamily ny ankamaroan'ny heriny hanakanana ny fanoherana ny rivotra.
Nefa rehefa mijanona eo akaikin'ny mpamily iray ny mpamily iray dia voaro amin'ny be dia be ianao. Manamora kokoa ny fanaovana pedal izany ary afaka manaraka ny mpitaingina eo alohany ianao. Mba handrefesana izany dia tsy maintsy jerenao ny habetsaky ny hery ateraky ny bisikileta.
Eto amin'ny lohan'ny peloton, mpitaingina Tour deFrance dia hamokatra herinaratra farafahakeliny 300 watt. Nitsambikina tamin'ny bisikileta aho hijery ilay fahatsapana izany ary roa kilometatra amin'ny 300 watts ihany no tena mafy. Ho fampitahana: raha misy mpamily ao ambadiky ny valahana amin'ny peloton, dia mila mamorona manodidina ny 240 watt fotsiny izy mba hihetsika amin'ny hafainganam-pandeha mitovy.
Mora kokoa ny mitazona 240 watts mandritra ny roa kilometatra. Na dia mety hamita sehatra fisaka 200 kilometatra miaraka aza izy roa, dia ho reraka kokoa ny iray noho ilay iray hafa. Izany no ahafahanao mahita ny sasany amin'ireo mpamily tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana eto.
Manangona ny mpiara-miasa aminy izy ireo izay ny asany ankehitriny ny manao asa mafy mba hipetrahan'ny mpitaingina bisikileta tsara indrindra ao amin'ny ekipa ho an'ny faritra sarotra indrindra, dia ireo tendrombohitra. Aiza izy ireo no mila irery. Rehefa manomboka mihazakazaka ambony ny peloton dia miadana izy.
Amin'ity dingana ity, ny hazakazaka dia tsy dia ady amin'ny fanoherana ny rivotra fa tsy ny hery misintona, izay misy fiantraikany amin'ny mpamily rehetra ao amin'ny peloton. Ka izao ny mpamily rehetra dia tsy maintsy mampiasa hery tsy manam-paharoa eo alohany sy any aoriana hahafahany manaraka ny hafainganana. Tamin'ny 2010, ohatra, ilay bisikileta danoà Chris Anker Sorensen dia tafakatra an-tampony tamin'ny fiakarana Tourmalet. 'Jereo ny endrik'i Chris Anker Sorenesen.
Nizara ny fanaintainana teo amin'ny faran'ny izy. Amin'ny maha-mpitarika azy dia izy no nandidy ny hafainganan'ny vondrona iray manontolo. Ity tabilao ity dia mampiseho ny zava-bitany tamin'ny fiakarana farany.
415 watts no salan'isa nataony nandritra ny 11 minitra. '... endrik'i Chris Anker Sorensen izao izay tena mizara ny fanaintainana.
Ary teto dia nahatratra watt 590 tsy mampino. 'Fiara tsara avy any Chris Anker Sorenson, fa mandra-pahoviana no haharetany?' Jereo izao Chris Horner mpitondra bisikileta amerikanina. Na dia toerana maromaro tao ambadik'i Sorenson aza izy dia nitovy ny fampisehoana nataony.
g fihenan'ny vidin'ny solika
Arakaraka ny fiakarana haingana kokoa an'i Sorenson no nahasarotan'ny fijanonan'ny peloton. Ary noho izany dia nanomboka nisaraka ny formation satria nianjera tany aoriana ireo mpitaingina malemy. Ity no fotoana amin'ny hazakazaka rehefa miova ny mpitaingina ny Tour tsara indrindra avy amin'ny famolavolana ny tanjany manokana mba handrosoana.
Nanafika ihany i Andy Schleck tamin'ny farany ary niaraka taminy i Alberto Contador. Nianjera tany aorin'izy ireo ny hazakazaka toy ny roa amin'ireo mpamily tsara indrindra eto: Andy Schleck avy any Luxembourg sy Alberto Contador avy any Espana, izay nihorona tany ambadiky ny peloton nandritra ny dingana lava. Fa eto kosa dia manakatra ny Tourmalet izy ireo ary miainga ho amin'ny fandresena. tao anatin'ny valo kilometatra farany, tokony hamorona 400 watt mahery ny tsirairay.
Contador amin'ny akanjo mavo mavo no mpitarika ankapobeny tamin'ny Tour de France, saingy valo segondra monja mialoha. Amin'ny laharana faharoa i Schleck, izay hanandrana hamoy azy amin'ity fiakarana ity. 'Andy Schleck mitondra fiara toy ny lehilahy manana' Loha loha hatreny amin'ny tampony
Marina izany Schleck. Kontador! Mandresy i Schleck! Contador no faharoa! Schleck dia nanongana an'i Contador teo an-dohan'ny Tourmalet tamin'ny sakany iray volo mba hahazoana ny lampihazo. Saingy satria tsy namoy izany izy dia nitana ny lohany tamin'ny ankapobeny i Contador ary nandresy tamin'ny Tour de France.
Ity karazana tantara an-tsehatra ity dia tsy azo atao any an-tendrombohitra ihany, ary ny làlan'ity taona ity dia manandanja tokoa. Ny fitsangatsanganana amin'ity taona ity dia antsoina hoe avo indrindra amin'ny tantara noho ny fiakarana marobe tao anatin'ny telo herinandro. Misy fiakarana fito ao anatin'ny iray andro monja.
Na dia efa tapa-bolana mahery aza tamin'ny hazakazaka, ny mpitaingina dia nihanika hatramin'ny 2,770 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, ka vao mainka sarotra ny fiakarana. Izany no mahatonga ny Tour de France ho hazakazaka mavesatra indrindra sy malaza indrindra amin'ity fanatanjahantena ity. Ny mpandresy dia tsy ny mpitaingina matanjaka indrindra, fa ilay mahazaka ny fanaintainana indrindra ary manana izay takiny mba handresena ny tendrombohitra.
Hitan'izy ireo ve ilay vehivavy nahatonga ny fianjerana Tour de France?
Rehefa avy nanao antso avo ho an'ny vavolombelona dia fantatra ilay olona,HITA, ary ankehitrinyamin'nyfitazonana polisyamin'nyLanderneau, hoy ny RTL. Raha ny filazan'i Reuters dia nitodika izyamin'ny. Ilay frantsay 30 taonaVEHIVAVYampangainanytsy an-tsitraponiterakaratra ary miatrika lamandyny1.500 euro.30. 2021.
Firy ny mpitaingina nandao ny Tour de France?
Ny fialanaeFAhatreto dia nahatratra 27 tao amin'nyTour de France.3
Hitan'izy ireo ve ilay nahatonga ny fianjerana Tour de France?
Ilay mpijery mitazona sorabaventy eo anilanynyny lalana amin'nyTour de Francetamin'ny sabotsy izay nifandray tamin'ny bisikileta Tony Martin synahatongafifandonana lehibe no voasambotra, hoy ny gazety frantsay RTL.30. 2021.
Androany, mpanao fanatanjahantena sangany no hanaopoop ny patalohaary mitohy. Ataovy ao an-tsaina izay mitranga rehefampitaingina bisikiletydia voaterypoop ny pataloha. Ireo matihanina dia mifaninana amin'ny toe-javatra izay tsy takatry ny saina ny vatany fa mahatsiaro ho faty izy io.07.21.2015
Mbola velona lava ve ny bisikileta?
Ireo izay nandeha bisikileta matetika dia nilaza fa miasaho ela velona kokoa. ireo izay nampiasa ny bisikileta ho fitaterana miasa dia niaina taham-pahafatesana ambany kokoa na dia taorian'ny fanitsiana aza ny fanaovana asa ara-batana amin'ny fotoana fialamboly Ireo izayTsytsy ny tsingerina hiasa dia niaina taham-pahafatesana 39% avo kokoa noho ireo izayTsy.12.31.2018
Nahita ny mpankafy Tour de France ve izy ireo?
Voasambotry ny polisy PARIS (AP) ny alarobia ampankafyanjaraamin'nyantontam-bato lehibe atny Tour de Francenandritranydingana fanokafana amin'ny hetsika lehibe indrindra amin'ny bisikileta, hoy ny fampitam-baovao avy any an-toerana.nyzandarimarianyLanderneau, atsinanananyBrest, dia nametraka antso ho an'ny vavolombelona taoriana kelin'izaynypileup.30. 2021.
Iza no nahatonga ny fianjerana Tour de France 2021?
Ilay mpanohana izaynahatongafaobe manaitrafahasimbanaao amin'nyTour de Franceny sabotsy dia voasambotra, raha ny tatitra maro. Saika ny rehetranyvoafafa tamin'ny dingana 1 ny peloton rehefa nifandona tamin'ny takelaka fanoratan'ny mpankafy i Tony Martin (Jumbo-Visma), izay niteraka domino mahatsiravina teo amin'ireo mpitaingina azy.30. 2021.
Momba ny bisikileta ve ny triathletes Pee?
Fivalanana. Ny fiantombohan'ny hazakazaka dia miteraka fahavoazana ho an'ny ankamaroan'nytriathletes. Tsy misy fiheverana firy ireo hazakazaka manaraka azy ireo, ny sasanytriathleteshanala tena rehefa mitaingina nybisikileta, avy eo araho ny taratasy fiasana amin'ny famafana tavoahangy rano.
Nahoana ny bisikileta no manaratra ny tongotr'izy ireo?
Iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny matihaninabisikileta no manaratra ny tongonydia ny manaonyfanorana matetika aorian'ny fitaterana dia mahazo aina kokoa. Antony iray hafaniharatraNy fitsaboana ny aretin-dàlana na ny ratra hafa aorian'ny fianjerany dia mora kokoa raha tsy misy ny volo ao an-dàlana. Ny fehikibo dia azo asiana mivantana amin'ny hoditra.
Iza no fianjerana mahatsiravina indrindra amin'ny Tour de France?
Angamba ny fianjerana mahatsiravina indrindra hijerena ny tarika, ny loza mahatsiravina nataon'i Jens Voigt nidina tany amin'ny col du Petit Saint Bernard, no iray izay tsy hohadinoin'ireo mpankafy bisikileta. Nandehandeha nihoatra ny 60 mph i Voigt raha ny kodiarany teo aloha no nidona tamin'ny vodin-dàlana, nandefa azy nitodika tany am-by aloha.
Iza no tafiditra tamin'ny fianjeran'ny Tour de France tamin'ny 1985?
Bernard Hinault, 1985 Ilay Frantsay Bernard Hinault dia teny an-dàlana hitaky ny fandreseny Tour de France fahadimy tamin'ny 1985 raha niseho teo amin'ny sehatra faha-14 io loza io, niaraka tamin'ny vondrona mpiambina iray minitra tao ambadiky ny Amerikanina Greg LeMond i Hinault. Teo amin'ny haingam-pandeha mankany amin'ny tsipika, i Hinault sy ny dimy hafa dia voafangaro tamin'ny antontam-bato lehibe.
Oviana i Lance Armstrong no nianjera tao amin'ny Tour de France?
Andro hafanana mahery setra nanimba ny vintana nananan'i Joseba Beloki hampiakatra an'i Lance Armstrong tamin'ny fitsidihana 2003. Miditra amin'ny laharana faharoa amin'ny ankapobeny i Beloki tamin'ny ankapobeny, nikapoka arofanina amoron-dalana izay nanjary levona noho ny hafanana marobe i Beloki. Mba hampifangaroana ny raharaha dia teo afovoan'ny fidinana haingam-pandeha i Beloki miaraka amin'i Lance Armstrong amin'ny kodiarany.